Author: Samukinos Tashura
Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha. Cutubka 16aad dastuurkka Qodobbada Guud.
Su’aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay isla markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah adstuurka dhaafo arrintuna tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Shirweynaha qaran ee soconayo muddo seddax maalmood ayaa ah bilowga geeddi-socod looga gol leeyahay in Soomaaliya loo yeelo dastuur cusub kaasi oo beddeli doono Dastuurka Ku-meel gaarka ah oo ay isku raaceen ergo oo ka tirsan Golaha Ergooyinka Qaranka.
Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qodob kale oo Warar ah.
Lahaanshaha sawirka a Image caption Dastuurka Somalia Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka. Dowlada federaalka ah iyo maamul goboleedyada ayaa qorsheynaayo in dastuurka cusub u diyaar noqdo ka hor doorashada qof iyo cod ee lagu wado in ay dhacdo ka.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka. Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal.
Waxaa u ku baaqay in la sameeyo wadatashiyo ballaaran, kuwaasi oo natiijodoodu looga gol leeyahay in ay Soomaaliya u suurtageliso geeddi-socod siyaasadeed oo caddaalad ah islamarkaana loo dhan yahay. Mudane Khaire ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhameystiro geeddi-socodka dastuurka si dalka loo mideeyo, sarena loogu qaado kobaca dhaqaalaha iyo in la soo saaro dukumeenti cusub oo la isticmaali doono mustaqbalka.
Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Soomaaliya waxa haatan lagu xukuma Dastuur ku meel gaar ah, oo la ansixiyay 1-dii, Agosto, ki kaddib dhowr sano oo ay socdeen colaado. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Haddii sojalia jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Zahra Maxamed Axmed, oo ah haweenay u dhaqdhaqaaqdo xuquuqda haweenka, ayaa guddiga dib-u-eegista dastuurka ka codsatay in ay xaqiijiyaan in qoondada haweenka ee boqolkiba 30 la dhowro isla markana xuquuqda dadka naafada ah la wanaajiyo.